ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးမြား မိမိသဘောဆန်ဒဖွငျ့ ရာထူးမှ နှုတျထှကျခွငျးအား မွို့နယျအုပျခြုပျ ရးမှူးက ခှငျ့မပွုဟု နှုတျထှကျခွငျးအား တား၍ရနိုငျ/မရနိုငျ – laws | Kyaw Zaw Oo's Blog
March 2, 2019 March 2, 2019 kyaw zaw oo
ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးမြား မိမိသဘောဆန်ဒဖွငျ့ ရာထူးမှ နှုတျထှကျခွငျးအား မွို့နယျအုပျခြုပျ ရးမှူးက ခှငျ့မပွုဟု နှုတျထှကျခွငျးအား တား၍ရနိုငျ/မရနိုငျ
ရပ်​​/​ကျေးအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးများ မိမိသ​ဘောဆန္ဒဖြင့်​ ရာထူးမှ နှုတ်​ထွက်​ခြင်းအား မြို့နယ်​အုပ်​ချုပ်​ရးမှူးက ခွင့်မပြုဟု နှုတ်​ထွက်​ခြင်းအား တား၍ရနိုင်​/မရနိုင်​
Written by : တကျွန်းပြန်
၂၀၁၂ ရပ်​​/​ကျေးဥပ​ဒေ ပုဒ်​မ-၁၄ တွင်​ ရပ်​/​ကျေး အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးသည်​ ကျန်းမာ​ရေး​ကြောင့်​​သော်​
လည်း​ကောင်း မိမိဆန္ဒအ​လျောက်​​သော်​လည်း​ကောင်း တာဝန်​မှနှုတ်​ထွက်​ခွင့်​ပြုရန်​ မြို့နယ်​ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးထံ တင်​ပြခွင့်ရှိသည်​။
ပုဒ်​မ-၁၅ တွင်​ မြို့နယ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးသည်​ ရပ်​ကွက်​ သို့မဟုတ်​​ ကျေးရွာ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးတစ်​ဦး ဦး နှင့်ပတ်​သက်​၍ ​အောက်​ပါအ​ကြောင်းတစ်​ရပ်​ရပ်​​ပေါ်​ပေါက်​လျှင်​ စုံစမ်းစစ်​​ဆေးမှုပြုရန်​ လိုအပ်​ပါက အဖွဲ့ဖြင့်​ စုံစမ်းစစ်​​ဆေးမှုပြု ပြီးနှုတ်​ထွက်​ခွင့်ပြု ခြင်း၊ တာဝန်​မှယာယီရပ်​ဆိုင်းခြင်း သုိ့မဟုတ်​ ရပ်​စဲခြင်းပြုနိုင်​သည်​ –
(က) တာဝန်​မှနှုတ်​ထွက်​ခွင့်​ပြုရန်​ တင်​ပြချက်​ကို လက်​ခံရရှိခြင်း
(ခ) အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး လိုက်​နာရမည့်​ကျင့်​၀တ်​ကို​ ဖောက်​ဖျက်​ခြင်း
(ဂ) တည်​ဆဲဥပ​ဒေတစ်​ရပ်​ရပ်​အရ အ​ရေးယူခံရခြင်း
(ဃ) အခြားအရပ်​​ဒေသတစ်​ခုခုသို့ အမြဲတမ်း​ ပြောင်း​ရွှေ့ခြင်း
(စ) အခန်း(၃)ပါ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးအရည်​အချင်း ပျက်​ယွင်းခြင်း
– ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။
​ဖော်​ပြပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်​တွင်​ “လိုအပ်​ပါက” စစ်​​ဆေးမှုပြုလုပ်​ပြီး ဆိုသည်​မှာ ပုဒ်​မ-၁၅ ပုဒ်​မခွဲ (က) ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်​​​ဘဲ ကျန်​ပုဒ်​ခွဲများကို ရည်​ညွှန်းရာ​ရောက်​​နေပါ​ကြောင်း . . . ။
ဥပ​ဒေကို​လေ့လာပါက – တည်​ဆဲဥပ​ဒေများနှင့်ပတ်​သတ်​လျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံ ဥပ​ဒေ ပုဒ်​ မ ၄၄၉ အရ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေသည် ဥပဒေအားလုံး၏​အ​ခြေခံဖြစ်​ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေနှင့်ဆန့်​ကျင်​​နေပါ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေကိုသာ လိုက်​နာကြရသည်​။
နိုင်​ငံ​တော်​သမ္မတနှင့်​ဒုတိယသမ္မတများပင်​ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံ ဥပ​ဒေ ပုဒ်​မ-၇၂ အရ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရ သမ္မတ ရာထူးမှ နှုတ်​ထွက်​လိုလျှင်​ နှုတ်​ထွက်​ခွင့်ပြုရမည်​ (shall be allowed) ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်​။
​ခြေ/ဥပုဒ်​မ-၂၃၅ တွင်​ ပထစ ၀န်​ကြီး နှင့်​ဒုဝန်​ကြီးများ ၎င်းတုိ့ဆန္ဒအရ ရာထူးမှနှုတ်​ထွက်​လိုလျှင်​ နှုတ်​ထွက်​နိုင်​​သည်​ (may resign) ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။
​ခြေ/ဥ ပုဒ်​မ-၃၀၃(က) တွင်​ ပထစ တရားသူကြီးချုပ်​ နှင့် တရားသူကြီးများ ၊ ပုဒ်​မ-၂၄၀ (ခ)တွင်​ ပထစ ​ရှေ့​နေချုပ်​ နှင့် ဒု​ရှေ့​နေချုပ်​များ ၊ ပုဒ်​မ-၃၁၂(က) တွင်​ ပြည်​နယ်​/တိုင်း တရားသူကြီးများ မိမိတို့ဆန္ဒအရ နှုတ်​ထွက်​လိုက နှုတ်​ထွက်​နိုင်​သည်​ဟု ယင်းပုဒ်​မ-၂၆၄(က)တွင်​ တိုင်း/ပြည်​နယ်​၀န်​ကြီးချုပ်​များ သမ္မတထံတင်​ပြပြီး ဆန္ဒအရ နှုတ်​ထွက်​လိုက နှုတ်​ထွက်နိုင်​သည်​ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။
ထို့အပြင်​ ရပ်​/​ကျေးအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးများ ခန့်​အပ်​ခြင်းကို ဖွဲ့စည်းပုံ အ​ခြေခံဥပ​ဒေ ပုဒ်​မ-၂၈၉ တွင်​ရပ်ရွာက ကြည်​ညို လေးစားသူ သိက္ခာသမာဓိရှိသူတစ်​ဦးဦးကို ဥပ​ဒေနှင့်​အညီ ခန့်​အပ်​​ဆောင်​ရွက်​​စေရမည်​ ဟုပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။
ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေအရ နိုင်ငံ​တော်​၏ အထွဋ်အထိပ်ဖြစ်​​သော နိုင်​ငံ​တော်​သမ္မတသည်​ပင်​လျှင် ဆန္ဒအရ နှုတ်​ထွက်​လိုက နှုတ်​ထွက်​နိုင်​သည်​ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါလျက်​ အနိမ့်​ဆုံးဖြစ်​​သော ရပ်​/​ကျေးအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးနှုတ်​ထွက်​ခြင်းကို ခွင့်မပြုခြင်းသည်​ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံ ဥပ​ဒေကို မလိုက်​နာခြင်းသာဖြစ်​သည်​။
နိုင်​ငံ​တော်​သမ္မတ/ဒုတိယသမ္မတတို့ သာမက ၀န်​ကြီး အဆင့်​ဆင့်​ကို လွှတ်​​တော်​က စွပ်​စွဲပြစ်တင် နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး စွပ်​စွဲလာပါက စွပ်​စွဲချက်​မှန်​မမှန်​ စုံစမ်းပြီး မှန်​ကန်​က ရာထူးမှရပ်​စဲရမည်​ဟု ​ခြေ/ဥတွင်​ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။
ရပ်​/​ကျေးဥပ​ဒေ တွင်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးအားပြည်​သူက စွပ်​စွဲခြင်း/တင်​ပြခြင်းကို ယင်းဥပ​ဒေပုဒ်​မ-၅
အခန်း (၃)တွင်​ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်​။ ထိုသုိ့ တိုင်​တန်းစွပ်​စွဲလာမှသာ မြို့နယ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက ယင်းဥပ​ဒေပုဒ်​မ-၁၅ အရ အဖွဲ့ဖြင့်​ စုံစမ်းစစ်​​ဆေးရမည်​ဖြစ်​ပြီး စွပ်​စွဲချက်​မှန်​က အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး ရာထူးမှ ရပ်​စဲရမည်​ ဖြစ်​သည်​။
ထို့​ကြောင့်​ ရပ်​/​ကျေးအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးက ဆန္ဒအ​လျောက်​ နှုတ်​ထွက်​ခွင့်တင်​သည်​ကို ခွင့်မပြုခြင်း သည်​ ဖွဲ့စည်းပုံအ​ခြေခံဥပ​ဒေနှင့် ဆန့်​ကျင်​သည့်​အပြင်​ ရပ်​/​ကျေးအုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးဥပ​ဒေတွင်​လည်း
မြိုနယ်​အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူး အနေဖြင့် နှုတ်​ထွက်​ခွင့်​မပြုဘဲ နှုတ်​ထွက်​ခွင့်တင်​ပြသည်​ကို ငြင်းပယ်​နိုင်​​ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းချက်​ တစ်​စုံတရာမပါဝင်​ပါ​ကြောင်း ထိုသုိ့ ခွင့်မပြုဘဲထားနိုင်​သည်​ဟု ယင်းဥပ​ဒေတွင်​ပြဋ္ဌာန်းထားပါကလည်း​ ခြေ/ဥနှင့်ဆန့်ကျင်​​နေ၍ ပျက်​ပြယ်​သွားမည်​သာဖြစ်​​ကြောင်း သိ​ဖို့လိုသည်​။
ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးမြား မိမိသဘောဆန်ဒဖွငျ့ ရာထူးမှ နှုတျထှကျခွငျးအား မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက ခှငျ့မပွုဟု နှုတျထှကျခွငျးအား တား၍ရနိုငျ/မရနိုငျ
Written by : တကြှနျးပွနျ
၂၀၁၂ ရပျ/ကြေးဥပဒေ ပုဒျမ-၁၄ တှငျ ရပျ/ကြေး အုပျခြုပျရေးမှူးသညျ ကနျြးမာရေးကွောငျ့သျော
လညျးကောငျး မိမိဆန်ဒအလြောကျသျောလညျးကောငျး တာဝနျမှနှုတျထှကျခှငျ့ပွုရနျ မွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူးထံ တငျပွခှငျ့ရှိသညျ။
ပုဒျမ-၁၅ တှငျ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးသညျ ရပျကှကျ သို့မဟုတျ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးတဈဦး ဦး နှငျ့ပတျသကျ၍ အောကျပါအကွောငျးတဈရပျရပျပျေါပေါကျလြှငျ စုံစမျးစဈဆေးမှုပွုရနျ လိုအပျပါက အဖှဲ့ဖွငျ့ စုံစမျးစဈဆေးမှုပွု ပွီးနှုတျထှကျခှငျ့ပွု ခွငျး၊ တာဝနျမှယာယီရပျဆိုငျးခွငျး သို့မဟုတျ ရပျစဲခွငျးပွုနိုငျသညျ –
(က) တာဝနျမှနှုတျထှကျခှငျ့ပွုရနျ တငျပွခကျြကို လကျခံရရှိခွငျး
(ခ) အုပျခြုပျရေးမှူး လိုကျနာရမညျ့ကငျြ့ဝတျကို ဖောကျဖကျြခွငျး
(ဂ) တညျဆဲဥပဒတေဈရပျရပျအရ အရေးယူခံရခွငျး
(ဃ) အခွားအရပျဒသေတဈခုခုသို့ အမွဲတမျး ပွောငျးရှခွေ့ငျး
(စ) အခနျး(၃)ပါ အုပျခြုပျရေးမှူးအရညျအခငျြး ပကျြယှငျးခွငျး ဟု ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
ဖျောပွပါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြတှငျ “လိုအပျပါက” စဈဆေးမှုပွုလုပျပွီး ဆိုသညျမှာ ပုဒျမ-၁၅ ပုဒျမခှဲ (က) ကို ဆိုလိုခွငျးမဟုတျဘဲ ကနျြပုဒျခှဲမြားကို ရညျညှနျးရာရောကျနပေါကွောငျး . . . ။
ဥပဒကေိုလလေ့ာပါက – တညျဆဲဥပဒမြေားနှငျ့ပတျသတျလြှငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ ပုဒျ မ ၄၄၉ အရ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒသေညျ ဥပဒအေားလုံး၏အခွခေံဖွဈပွီး ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနှေငျ့ဆနျ့ကငျြနပေါ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒကေိုသာ လိုကျနာကွရသညျ။
နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့ဒုတိယသမ်မတမြားပငျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒေ ပုဒျမ-၇၂ အရ ၎င်းငျးတို့၏ ဆန်ဒအရ သမ်မတ ရာထူးမှ နှုတျထှကျလိုလြှငျ နှုတျထှကျခှငျ့ပွုရမညျ (shall be allowed) ဟု ပွဋ်ဌာနျးထားပါသညျ။
ခွေ/ဥပုဒျမ-၂၃၅ တှငျ ပထစ ဝနျကွီး နှငျ့ဒုဝနျကွီးမြား ၎င်းငျးတို့ဆန်ဒအရ ရာထူးမှနှုတျထှကျလိုလြှငျ နှုတျထှကျနိုငျသညျ (may resign) ဟု ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
ခွေ/ဥ ပုဒျမ-၃၀၃(က) တှငျ ပထစ တရားသူကွီးခြုပျ နှငျ့ တရားသူကွီးမြား ၊ ပုဒျမ-၂၄၀ (ခ)တှငျ ပထစ ရှနေ့ခြေုပျ နှငျ့ ဒုရှနေ့ခြေုပျမြား ၊ ပုဒျမ-၃၁၂(က) တှငျ ပွညျနယျ/တိုငျး တရားသူကွီးမြား မိမိတို့ဆန်ဒအရ နှုတျထှကျလိုက နှုတျထှကျနိုငျသညျဟု ယငျးပုဒျမ-၂၆၄(က)တှငျ တိုငျး/ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျမြား သမ်မတထံတငျပွပွီး ဆန်ဒအရ နှုတျထှကျလိုက နှုတျထှကျနိုငျသညျဟု ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
ထို့အပွငျ ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးမြား ခနျ့အပျခွငျးကို ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ-၂၈၉ တှငျရပျရှာက ကွညျညို လေးစားသူ သိက်ခာသမာဓိရှိသူတဈဦးဦးကို ဥပဒနှေငျ့အညီ ခနျ့အပျဆောငျရှကျစရေမညျ ဟုပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ နိုငျငံတျော၏ အထှဋျအထိပျဖွဈသော နိုငျငံတျောသမ်မတသညျပငျလြှငျ ဆန်ဒအရ နှုတျထှကျလိုက နှုတျထှကျနိုငျသညျဟု ပွဋ်ဌာနျးထားပါလကျြ အနိမျ့ဆုံးဖွဈသော ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးနှုတျထှကျခွငျးကို ခှငျ့မပွုခွငျးသညျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒကေို မလိုကျနာခွငျးသာဖွဈသညျ။
နိုငျငံတျောသမ်မတ/ဒုတိယသမ်မတတို့ သာမက ဝနျကွီး အဆငျ့ဆငျ့ကို လှတျတျောက စှပျစှဲပွဈတငျ နိုငျကွောငျး ပွဋ်ဌာနျးထားပွီး စှပျစှဲလာပါက စှပျစှဲခကျြမှနျမမှနျ စုံစမျးပွီး မှနျကနျက ရာထူးမှရပျစဲရမညျဟု ခွေ/ဥတှငျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။
ရပျ/ကြေးဥပဒေ တှငျအုပျခြုပျရေးမှူးအားပွညျသူက စှပျစှဲခွငျး/တငျပွခွငျးကို ယငျးဥပဒပေုဒျမ-၅
အခနျး (၃)တှငျ ပွဋ်ဌာနျးထားသညျ။ ထိုသို့ တိုငျတနျးစှပျစှဲလာမှသာ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးက ယငျးဥပဒပေုဒျမ-၁၅ အရ အဖှဲ့ဖွငျ့ စုံစမျးစဈဆေးရမညျဖွဈပွီး စှပျစှဲခကျြမှနျက အုပျခြုပျရေးမှူး ရာထူးမှ ရပျစဲရမညျ ဖွဈသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးက ဆန်ဒအလြောကျ နှုတျထှကျခှငျ့တငျသညျကို ခှငျ့မပွုခွငျး သညျ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒနှေငျ့ ဆနျ့ကငျြသညျ့အပွငျ ရပျ/ကြေးအုပျခြုပျရေးမှူးဥပဒတှေငျလညျး
မွိုနယျအုပျခြုပျရေးမှူး အနဖွေငျ့ နှုတျထှကျခှငျ့မပွုဘဲ နှုတျထှကျခှငျ့တငျပွသညျကို ငွငျးပယျနိုငျကွောငျး ပွဋ်ဌာနျးခကျြ တဈစုံတရာမပါဝငျပါကွောငျး ထိုသို့ ခှငျ့မပွုဘဲထားနိုငျသညျဟု ယငျးဥပဒတှေငျပွဋ်ဌာနျးထားပါကလညျး ခွေ/ဥနှငျ့ဆနျ့ကငျြနေ၍ ပကျြပွယျသှားမညျသာဖွဈကွောငျး သိဖို့လိုသညျ။
Previous ခတျေအဆကျဆကျ မွနျမာနိုငျငံ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒမြေား (download)
Next ရပျကှကျ သို့မဟုတျ ကြေးရှာအုပျစု အုပျခြုပျရေး ဥပဒေ